Ime Tutorial Video - Site Mbido ka Expert
> Resource> Record> Ime Tutorial Video - Site Mbido ka Expert
Ime a screencasting video nkuzi bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu ụzọ maka ọzụzụ na ngosi. Ebe a bụ ụfọdụ isi Atụmatụ nyere gị aka bụrụ a screencast ọkachamara.
Ihe bụ isi iwu
Adịla na-eleghara ihe ndị ị na kwesịrị ịma tupu amalite na-eme ka nkuzi video. The ọma mere nkwadebe pụrụ inyere gị aka a otutu nakwa dị ka ịzọpụta tọn oge. Gụọ ihe ndị a na-enwe a onwe ego, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-akpa oge ime screencasting.
Ị nwere ike-agba ọsọ site edemede abụọ ma ọ bụ ugboro atọ tupu na-ahụ isi ihe ụfọdụ na ike ga-kachasị na mma. Nke pụrụ inye aka mee ka gị na nkuzi video ire ụtọ ma doo anya.
Họrọ a nri ngwá ọrụ
Mgbe ahọrọ a nri ngwá ọrụ na-amalite ndekọ. A bụ ndepụta nke nkwanye:
Igwe okwu: Logitech USB desktọọpụ okwu. Ọ dị mfe na-eji na obere na ị na-adịghị ịgbakwunye analọg Maị interface gị na kọmputa.
Ihuenyo edekọ: DemoCreator. Ọ bụ ihe dị ike na ihuenyo ndekọ ngwá ọrụ iji nyere gị mfe idekọ videos nke na-enye aka, na-akpali ma na nke jupụtara creativities.
Video edezi software: N'ihi na isi edezi, m na-eji wuru na-nchịkọta akụkọ nke DemoCreator ma ọ bụ ọzọ oké video edezi tool- Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor).
Mfe dum usoro
Mgbe ahụ, ka ina malitere. Ị nwere ike amalite gị video na a mfe onwe mmeghe na guputa nkọwa nke gị nkuzi. Eme ka ahụ n'aka na ị na-agwa ihe ziri ezi ruo n'ókè n'ime nke kasị nso oge. Ka ihe atụ, na-eji a 1-2-3 nzọụkwụ ndu ya mere ndị mmadụ nwere ike mfe ịchụkwudo ihe ị na-ekwu banyere ya.
Nọgidenụ na-òké ọnụnọ
Adịghị akpali gị òké azụ na-apụta mgbe-ekwu okwu, ma ọ bụ kwụsịtụ ugboro ugboro ikwu ihe na-adịghị mkpa. Ọ bụghị nanị na ewute gị kiriri kamakwa ịdọpụ uche ha mmasị ka nkuzi. Ụzọ kasị mma bụ na-aka gị anya òké na-eji ya nanị mgbe ị na-aga ime ka nzọụkwụ ọzọ.
The elu edezi
Ọ bụrụ na ị na-eji ihuenyo edekọ na edezi atụmatụ dị ka DemoCreator ma ọ bụ ndị ọzọ, na-agbalị tinye ụfọdụ callouts, akụ ma ọ bụ animations-adọta ndị mmadụ si mmasị. E wezụga na, mbugharị na ibenata abụọ bara uru screencasting atụmatụ nke na-eme nkuzi video.
Mkpakọ file size
Ọ bụ ezie na Flash (SWF) faịlụ bụ kasị nta mmepụta, ọ na-achọ a weebụ Bochum ebe nke bụ dakọtara na Flash otú ndị mmadụ nwere ike ile ya na ihe nchọgharị. Ugbu a na ndị mmadụ na-amasị ịkọrọ ha vidiyo na nkwanye video saịtị dị ka YouTube, azọpụta gị video dị ka AVI ma ọ bụ MP4. M na gbalịrị ọtụtụ abịakọrọ codec na hụrụ Wondershae Video Ntụgharị dabara m mkpa m n'ihi na ọtụtụ oge. Ọ na-enyere gị iji tọghata mmepụta video ka ọ bụla usoro dị ka amasị gị.
Ahapụ gị ezigbo onye Ama
Ma ihe ndị na-ede akwụkwọ, mgbe uche a ohere Akara a oke imebisi na gị video. Ị nwere ike ịhapụ ozi ịkpọtụrụ gị na njedebe nke video ka ndị mmadụ ịhụ gị, too gị, mee ka ị maara nke ọma ma ọ bụrụ na o kwere omume.
Mee ka a sequel n'ihi na gị N'ezie
Ekwusara desktọọpụ vidiyo na a kwụ n'ahịrị bụ ezigbo ụzọ ka ndị mmadụ nọrọ gburugburu. Ọdịnaya nke video usoro nwere ike ịbụ coherent, na-emelitere. Ọ bụrụ na ị na-amasị-eme ka otu set nke videos nke na-adịghị anya metụtara onye ọ bụla ọzọ, ọ bụ OK ma cheta na-ha nile n'okpuru otu udi.
Olee otú Tinye ihuenyo ndekọ Video on Facebook
Top 5 free na mma ihuenyo ndekọ Software
Olee otú Mee instructional Video na ihuenyo teepu
The Right Way idekọ Videos nke Computer ihuenyo
Top 5 Alternative ka Apowersoft ihuenyo edekọ na ndị ọzọ dị ike ọrụ
Best webcam edekọ 2015
10 Top Nsogbu na Solutions banyere Video nwuchi
Record Desktọpụ: Weghara n'akụkụ ọ bụla nke na Desktọpụ